Fiarahana miombon’antoka :: Hamerina hijery ny fifanarahana amin’ireo mpamatsy azy ny Jirama • AoRaha
Fiarahana miombon’antoka Hamerina hijery ny fifanarahana amin’ireo mpamatsy azy ny Jirama
Mitotongana. Hamerina hijery ny fifanarahana amin’ireo mpiara-miombon’ antoka aminy, toy ny mpamatsy solika sy ireo mpampanofa vondrom-pihary herinaratra, ny mpitantana ny orinasa Jirama. Fatiantoka amina arivo tapitrisa maromaro no mbola iainan’ ity orinasam-panjakana ity ankehitriny.
Fanambin’ireo mpikambana ao anatin’ny Filankevi-pitantanana vaovao ny hana­rena­na ireo lesoka nanjaka efa
am-polo taonany maro. Roa taona ny fe-potoana nomen’ ny fitondram-panjakana hanaovana an’izany fanarenana ny orinasa Jirama izany.
« Ny imasoana voalohany dia ny fampihenana ny famoaham-bola: ny fividia­nana solika sy ny fanofana vondrom-pihary herinaratra. Marihina fa avo roa heny ny ividianan’ny Jirama ny saran’ny herinaratra ao anatin’ ny fifanarahana misy, amin’ izao fotoana izao. Horaisina tsirairay ireo mpamatsy solika ireo. Hifanarahana ny tanjon’ ny Jirama. Rehefa tsy misy ny marimaritra iraisana dia hanao tolo-bidy hitady mpamatsy vaovao indray izahay», hoy Andriamanampisoa Rasamoelina Solo, filohan’
ny Filankevi-pitantanan’ny orinasa Jirama.
Tsiahivina fa mitentina 1 200 000 tapitrisa ariary ny famoaham-bolan’ny Jirama anatin’ny taona iray raha toa ka enina hetsy hatramin’ny fito hetsy tapitrisa ariary no vola ampidiriny. Tsy mbola ho foana tanteraka mano­loana izany ny fanampian’ny fanjakana azy.
Namoaka tondrozotra hanarenana ny orinasa Jirama ireo mpikambana ao amin’ny Filankevi-pitantanana, tamin’ ny sabotsy lasa teo, tetsy Anosy, izay nampahafantarina an’ireo mpiara-miasa sy mpiara-miombon’antoka isan-tsokajiny. Ao anatin’ny paik’ady ny fampitomboana ny masonkarenan’ny orinasa sy fampitomboana ny mpanjifa amin’ny alalan’ny Tetikasa hanatsarana ny fitantanana sy ny fandraharahana eo amin’ny sehatry ny herinaratra (Pagose) ary ny fanatsarana ny fitaova­na. Tsy hisy anefa ny fampiaka­rana ny saran’ny herinaratra.
Aorian’ny fiarenan-dohany dia hifantoka bebe kokoa amin’ny fampiasam-bola ity orinasam-panjakana ity ka hanatsara ny tolotra homeny ny mpanjifa.
Fivorian’ny parlemantera :: Hovoaboasana eny anivon’ireo Antenimiera ny Tetibolam-panjakana 2020